Sawirro: Caleemasaaarka Madaxweyne Obama
Jimco, Bisha Afraad 29, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 00:25
La daabacay 21.01.2013
Boqolaal kun oo qof ayaa ka qeybgalay caleemasaarkii madaxweyne Obama oo lagu qabtay magaalada Washington. La wadaag
Obama oo la dhaarinayo
Barack Obama, oo uu dhaarinayo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts xafladii caleemasaarka ee ka dhacday aqalka Capitol Hill, iyadoo ay la taagan tahay xaaskiisa Michelle iyo labadiisa gabdhood ee Sasha iyo Malia.
Dadka faraha badan ee ka qeybgalay xafladda caleemasaarka Obama, Washington, January 21, 2013. La wadaag
Fanaanada Beyonce oo ka heesaysa xafladda caleemasaarka Madaxweyne Obama, Washington, January 21, 2013
Madaxweyne Barack Obama oo gacmaha ruxaya kadib khudbadii uu ka jeediyay xafladda caleemasaarkiisii, Jan. 21, 2013. La wadaag
Madaxweyne Barack Obama oo ka hadlaya xafladda caleemasaarka ee guriga Capitol Hill, Jan. 21, 2013. La wadaag
Dadka ka qeybgalay xafladda caleemsaaarka madaxweyne Obama, Jan. 21, 2013. La wadaag
Goobta ay ka dhacday xafladda caleemasaarka Obama, Washington, Jan. 21, 2013.
Ka qeybgalayaasha caleemasaarka oo ruxaya calanka Maraykanka.
Haweenayn sidata calaamad ay ku sawiran yihiin Obama iyo Biden oo ay ku qoran tahay, "Waan joogay halkaasi", Jan. 21, 2013. La wadaag
Labada gabdhood ee uu dhalay Obama ee Malia iyo Sasha soo galaya goobta caleemasaarka.
Madaxweyne Obama oo galaya goobtaxafladda caleemasaarka ee Aqalka Capitol Hill. La wadaag
Ciidamada amniga oo taxan wadada Pennsylvania Avenue ee Washington, intii aysan bilaaban caleemasaarka 57aad ee madaxweynaha Maraykanka.
Dad u gacmo haatinaya madaxwyne Obama iyo kuxigeenkiisa Biden iyagoo saaran baabuurkooda limousine, Jan. 21, 2013, in Washington. La wadaag
Madaxweyne Obama iyo Senator-ka New York, UChuck Schumer, oo madax u ah guddiga isku-dhafka ah ee congresska u qaabilsan xafladdaha caleemasaarka, Washington, DC.
Taagerayaasha madaxweyne Barack Obama oo ruxaya calanka Maraykanka.
Beyonce oo ka heesaysa xafladda caleemasaarka, Washington, D.C., January 21, 2013. La wadaag
Taageerayaal ku sugan goobta National Mall ee caleemasaaarka Obama, Washington, D.C.,January 21, 2013. La wadaag
Ciidamada ilaalada gaarka ah oo sugayay amniga xafladda caleemasaarka, Washington, D.C., January 21, 2013. La wadaag
Madaxweyne Obama oo uu dhaarinayo madaxa maxkamadda sare John Roberts, Washington, January 21, 2013. REUTERS/Rick Wilking (UNITED STA